archana: January 2011
Posted by archana at 1/26/20115comments:
Posted by archana at 1/24/2011 1 comment:
नेपालमा यो बर्षको सबै भन्दा हिट कुरानै गलत तरिकाले गरेको भए पनि सहि निसाना परेको पारसको हवाइफायर र देवीबाजेको झापु होला जस्तो छ।
पारसको हवाइ फायर तत्काल बिबादित भए नि घर ज्वाँईको कर्तुत था’ भए पछी तरिका गलत भए नि ठीक हो भनेर जनताले भने।
त्यस्तै गरेर झापु खाए पछी एमाले नेता झलनाथ खनालका परिवार र संयम नेताजिउ र केही कार्यकर्ता बाहेक सबै जना खुशी भएका छन। खुशीको लहर देश तथा बिदेश सबै तिर फैलिएको छ। ब्यापक राजनीतिक निराशा बिच देबी बाजेले हानेको चडकन् ले जनता बिच वाह् वाह् पाएको छ र उनको समर्थनमा फेसबुक पेज पनि खोली सकेको छ। जस्मा यो ब्लग लेख्दा सम्म 2900 जनाले मन पराइ सकेका छन् र अनलाइन फेसबुक ग्रुपले देवी प्रसाद रेग्मीलाइ १०,००० नगद पुरस्कार पनि दिने घोषणा गरेको छ । संसद भवनमा पनि झापु सबैनेताले खाएको महसुस गरेछन। तिनलाई अब देखी जनताको माझ आउँदा हेलमेट, गमबुट, लाईफ ज्याकेट चाहिने होला।
मैले कक्षा पाचमा लक्ष्मण सरको हात बाट खाएको झापु अहिले सम्म बिर्सेंको छैन मलाई लाग्छ अब झल्लु अंकलले पनि झापु सम्झी सम्झी संबिधान र नयाँ प्रधान मन्त्री छिटो छिटो बनाउन जोड दिने छन कि?
पारसले पनि राज्यले छुन र देख्न नसक्ने अपराधी खोजी खोजी पटका हवाइ फायर गर्दिए अझ पपुलर पो हुने थिए कि?
JhalNath Khanal Slapped by Devi Prasad Regmi VIDEO
Update: i have donated lil money to release devi jee from jail. if you wish to donate. click here
Posted by archana at 1/21/20116comments:
Posted by archana at 1/17/20114comments:
गूगलको पैसा फलेवास,पर्वतको श्री सुर्योदय युवा क्लब लाई
गूगलबाट आएको पैसा नेपाली रु.८०००(आठ हजार) पर्वत फलेवास, देविस्थान स्थित श्री सूर्योदय युवा क्लबलाई दिएको छु । आशा छ सानो रकम भए पनि ठुलो काम गर्न सहयोग मिल्ने छ। क्लबको बारेमा सानो जानकारी पनि राखेको छु । मलाई लाग्छ पैसा कमाएर कोही ठुलो मान्छे हुन सक्दैन र मान्छेलाई जती कमाए पनि पुग्दैन। यदी तपाईंहरु पनि सहयोग गर्न इच्छुक हुनु हुन्छ भने क्लबलाई संपर्क गर्न सक्नु हुनेछ।
उद्देश्य गाउंमा व्याप्त कुरिती तथा विसङ्गती हटाई समग्र गाउंको विकास गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना गरिएको यस श्री सूर्योदय युवा क्लबको मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार रहेको छ ।
(क) बिभिन्न सामाजिक कार्यहरु जस्तै बाटो घाटो, खानेपानी, सिचाई, पाटी पौंवा तथा मठमन्दिर आदि निमार्ण गर्ने ।
(ख) खेलकुदको विकास गर्ने ।
(ग) शैक्षिक क्षेत्र उकास्न सहयोग गर्ने ।
(घ) बिभिन्न प्रकोपमा सहयोग गर्ने ।
(ङ) बिभिन्न सिपमुलक तालिमहरु संचालन गर्ने ।
(च) संस्कृतीको जर्गेना गर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ।
(ज) सामाजीक न्याय गर्न सहयोग गर्ने ।
(झ) सम्पूर्ण युवाहरुलाई संगठित गरि देश विकासमा लगाउने ।
श्री सूर्योदय युवा क्लबले हालसम्म गरेका कार्यहरु ः
(क) कालीगण्डकी नदीको किनारमा पक्की पौंवा निमार्ण गरेको ।
(ख) फलेवास देखि पश्चिम भेग जाने गोरेटो बाटो निमार्ण गरेको ।
(ग) फलेवास देखि दक्षिण भेग जाने गोरेटो बाटो निमार्ण तथा मर्मत गरेको ।
(घ) देविस्थान गाउं विकास समिति वडा नं.३ मा श्री शिशु निकेतन प्राथमिक विद्यालयको स्थापना गरि संचालन गरेको ।
(ङ) देविस्थान गाउं विकास समितिका प्रत्येक विद्यालयका एक एक जना छात्र छात्रालाई जेहेन्दार छात्रवृृद्धी वितरण गरिएको ।
(च) समय समयमा बिभिन्न खेलकुद तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचलन गर्ने गरेको ।
(छ) खेलकुद तथा शैक्षिक स्तर उकास्न समय समयमा बिभिन्न खेलकुद तथा शैक्षिकसामाग्रीहरु खरिद गरि वितरण गर्ने गरेको ।
(ज) गाउंमा जाड रक्सी, तास जस्ता बिकृतीमा लागी झै(गडामा गर्ने व्यक्तिलाई दडित गरि कुलत छुटाउने कार्य गदंै आएको ।
(झ) देउसी भैली खेली उठेको पैसाबाट केही पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरु खरिद गरि पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यमा लागेको तर आर्थिक अभावका कारण उक्त कार्य गर्न पुरा गर्न नसकिएको ।
(ञ) बेला बेलामा बिभिन्न स्थानमा खानेपानी, सिंचाई, मोटरबाटो, गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने गरेको ।
(ट) बेला बेलामा गाउं सरसफाई अभियान संचालन गरि गाउं सरसफाई गर्ने गरेको ।
(ठ) बिवाह, वतबन्ध तथा बिभिन्न सामाजिक कार्यको लागि आबश्यक सामाग्रहरु टेण्ड, कुर्सी, गेट तथा अन्य सामानहरु खरिद गरेको ।
(ड) समय समयमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको ।
(ढ) बिभिन्न प्रकोपमा परेको व्यक्तिहरुलाई सहयोग गदै आएको ।
(ण) गाउंमा सम्पन्न हुने बिवाह, बतबन्ध तथा अन्य सामाजिक समारोहमा सम्पूर्ण कार्यहरु क्लवले गर्ने गरेको ।
(त) गाउंमा हुने झै(झगडा मिलाउने कार्य गदै आएको ।
(थ) युवाहरुलाई सगठित गराई सामाजिक कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरेको ।
५. श्री सूर्योदय युवा क्लबको भाबी कार्य योजना ः
(क) पुस्तकालय स्थापना गर्ने ।
(ख) क्लबको भवन निमार्ण गर्ने ।
(ग) क्लबद्धारा स्थापित श्री शिशु निकेतन प्राथमिक विद्यालयलाई माथिल्लो तहसम्म बढाउदै लैजाने ।
(घ) बिभिन्न सिपमुलक तालिमहरु संचालन गर्ने ।
(ङ) फलेवास प्रवेशद्धारा निमार्ण गर्ने ।
(च) फलेवास देखि दक्षिण र पश्चिम जाने बाटोमा खानेपानीको धारा निमार्ण गर्ने ।
(छ) बिभिन्न कुरिती तथा विसङ्गती हटाउदै जाने ।
(ज) संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने ।
(झ) शैक्षिक स्तर उकास्ने कार्यमा सहयोग गर्ने ।
(ञ) बाटोघाटो, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य बिभिन्न सामजिक कार्यहरु सम्पादन गदै जार्ने ।
(ट) बिभिन्न प्रकोपहरुमा सहयोग गर्ने ।
(ठ) समय समयमा स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गर्ने ।
(ड) युवा शक्तिलाई बिभिन्न सृजनशिल कार्यमा लगाउने आदि ।
एक घण्टाको लागि खुशी हुनु छ भने :- पार्कमा जाउ! एक हप्ताको लागि खुशी हुनु छ भने :- अफिसमा बिदा लिएर घुम्न जाउ! एक महिनाको लागि खुशी हुनु छ भने :- विवाह गर! जिबन भरिको लागि खुशी हुनु छ भने :- पढाई र पेसा प्रती इमान्दार होउ !मृत्‍यु पछी पनि खुशी हुनु छ भने :- जिबन रहदै समाज र अरुको लागि पनि केही गर --source fb
Posted by archana at 1/06/2011 11 comments: